Simple lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Misy lohateny toy ny lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Simple, izay nanangana be dia be ny tolotra mba hanao zavatra sasany, mba hahazoana ny vokatra. Ny fitantanana sy ny lalàna ao aminy sarotra, izay no mahatonga ny fialam-boly fotsiny izy ireo, fa ny foto-kevitra samy hafa foana. Izany dia mety ho Misafotofoto, fifaninanana na fitifirana lalao. Izany koa ny lojika sy mahafinaritra mba hilalao, ary tokony ho mampiasa lojika, fa ny asa mazava mandrakariva. Amin'ny ankapobeny, ny sary ao ireo kilalao, tsotra loatra, satria ny antitranterina ao mandalo, fa ny tsy azo lavina koa manana tombony.
Lalao Simple tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Simple lalao
Fidirana ho ao an-afaka manidina
Family Gardening Thomas
Fifandraisana. Hamaly faty.
Tsindrio ny Voalavo
Matsiro Planet Dinotaym
Fisehon'ny ny efitrano
Burrito ombidia valifaty
Anaty rano Mahjong
Superpitstseriya: ny fahaiza-mahandro sakafo ny pizza
Hanatona Play 3
Nahatan-Lesona isa 3
Noana be aho
Single Dinosaurs fandokoana
Bash ny solosaina
Mass fifamonoana 4
Miresaka Ginger 2
Ho an'ny fitiavana
Create zavatra. Beta
Sokatra Ninja zatovo Mutant: Inona no topping ny pizza?
Adventure Hazel tao amin'ny tilikambo fanilon-tsambo
Ny Audi R8 Pimp
Voankazo Ninja. Kitchen Ady
Helatra McQueen: fanasana fiara
Ben 10: Vahiny - Colorize
Pou ao amin'ny trano fialan-tsasatray noho ny fikarakarana eo amin'ny saoka izy
Miady fa ny diademany, Equestria Girls
Hairstyle Hollywood kintana
Fanjary Beauty Secrets
Farany Simple lalao
Ny Lalao House
2 Haingam-piraisan'ny mpilalao
Eva Ness 'Darkest Secrets
Izany dia lalao tsotra amin'ny aterineto dia hamela anao haka aina
Lalao Online Rehetra Simple lalao
Easy – ny fanalahidin 'ny fahombiazana!
Simple lalao, izany dia na inona na inona toy ny tsotsotra, izay mandika ara-bakiteny – tsotsotra. Ny maha mifototra amin 'ny zava-misy fa ny fitantanana tsy mitaky ny lecteur na fahaiza-manao manokana, sy ny solosaina – teknolojia vaovao. Toys mihazakazaka haingana, ary ianao ho asitrika ao amin'ny dingana, ary ny fanodinkodinana atao ny fitendry na totozy.
Inona no miavaka kokoa, kilalao Gamers tsotsotra dia tsy mametra ny taona ambaratonga, na ny tany, manome rehetra ny faritra samihafa indrindra ny loko sy ny tsirony. Anisan'ireo ny tolo-kevitra dia mora ny mahita ireo izay mifantoka amin'ny lahy na vavy mpihaino, olon-dehibe sy ny ankizy, fa misy ihany koa izany fa manerana izao rehetra izao. Lalao baolina, karatra, teny, mahjong sy mitovy mahasarika ny sain'ny tena rehetra. Misy ny lalao eo amin'ny lojikan'ny hevitra, saina, marina sy ny hafainganam-pandeha. Ireo izay tia ny « Die Hard », dia hahita eo amin'ny tolo-kevitra Lalao izay mitaky fisainana. Raha toa ianao ka mpankafy ny mpanao hetsika ao amin'ny sokajy misy foana ny nisongadina ho anareo.
Ny voalohany dia tonga tamin'ny lalao tsotra 1996 ary izany dia ny lalao karatra Solitaire. Efa izy ireo nanaraka ny tsaina, bingo sy lalao Bejeweled. Raha vao voalohany lalao foy andavanandro mikraoba toy ny onja io mety ho nijanona intsony. Players asaina;
tanteraka ny Misafotofoto
mba hilalao echec sy ny checkers
mitondra fiara eo amin'ny fiara
Amin'izao fotoana izao, ny tontolo virtoaly dia feno toromarika isan-karazany sy ny karazan-dahatsoratra, eo aminy;
risovalka ka hiasa ny
mitady zavatra, fikatsahana fahafaham-po
lalao amin'ny lojika sy marina
Ny Puzzles sy ny hafa
Izay rehetra izany fahasamihafana izany ny loko misy lalao, nahazo ny fon'ny olona an-tapitrisany, ary ho tonga olo-malaza. Angry Birds, Sonic ny sokina, Super Mario, ny afo sy ny rano, ary Mashinerium Samorost – dia ohatra vitsivitsy monja ny fantatra tsara kilalao, izay voatendry ho ela velona sy be voninahitra ho avy.
mandany fotoana miaraka soa, milalao lalao tsotra
Araka ny afaka mahatakatra, tsotra dia tsy miasa ho vokatra ireo no faran'izay tsotra. Isaky ny tari-dalana sy ny kilalao nametraka foana heviny sy ny asa sasany. Indraindray, mba hahazo na dia kely fomba te-hampifandray ny discursive fomba sy hahatsiaro ny sekoly Mazava ho azy fa eo ny tena siansa. Fa ny zavatra rehetra dia tena mampientam-po fa ireo ezaka tsy enta-mavesatra, fa sarotra ny tenako. Koa, ny lalao mijery foana ny mijery izany mamirapiratra, maro loko sy mirindra izay mahazo azy hatsarana fahafinaretana.
Mety ho tsara tarehy, tsara-voatsoaka sary antsipirihany na Soso-kevitra fotsiny ny toe-javatra. Mpitsidika tsy tapaka ny lalao toerana efa zatra hifandray ny olona-lalao, izay manao asa sasany nitsangana niala ny asa ny lalao. Ary toy izany koa ny olona rehefa ho velona amin'ny lalao video, dia toa toy ny saina ho velona ka nahasitrana ny tenanao.
TIC-tac-rantsan-tongony, ary hiady ranomasina ihany koa ny niala tamin'ny taratasy ho nomerika. Ary tsy ilaina ny fiadiana ny soratra fitaovana na mitady namana mba po ao amin'ny toerana tena tianay ampahibemaso-. Nandritra izany fotoana izany, ny ankizilahy voly nitokana teny an-ady lalao, mitifitra fahavalo ary ny fanangonana hevitra, ny ankizivavy dia naniraka mba hikarakara ny biby, mpahandro, ka angòny kilalao, akanjo ny modely mba hianatra ny fandrika ny makiazy.
lalao tsotra dia afaka voly sy manampy mizara ny andro mandritra ny fanorenana ny toeram-pambolena, na fandikana ny biriky miloko. Easy mifehy tsy midika hoe aina ny andalan-teny, ary izany dia miampy goavana manohana ny tsotsotra kilalao.